မေးခွန်း Prepar3D ကူညီပါ
လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ပေါင်း 1 လ #19 by Dariussssss
သငျသညျပြဿနာများ, အမှားအယွင်းများပါသို့မဟုတ်အကြောင်းသင့်လျှင်မေးခွန်းအချို့တွေ့ကြုံခံစားခဲ့လျှင် Prepar3D Simulator, ဒီမှာ post ။ ဒါ့အပြင်ဒီ Simulator ကိုအတွက်အမျိုးမျိုးသောပြဿနာများနှင့်အမှားများကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။
3 နှစ်ပေါင်း3ရက်သတ္တပတ်အကြာ #64 by အချစ်
ရက်အနည်းငယ်အကြာငါ "ကိုအသုံးပြုပြီးစတင်P3D V3.4 Balearic ကျွန်း "", installed ပထမဆုံးမြင်ကွင်းခဲ့ "နှင့်ကျွန်မ LEMH အတွက်မြေယာ၏မြင့်နှင့် LESL အတွက်တည်နေရာပြဿနာပြဿနာတစ်ခုသတိပြုမိသည်။
3 နှစ်ပေါင်း3ရက်သတ္တပတ်အကြာ #65 by Dariussssss
3 နှစ်ပေါင်း3ရက်သတ္တပတ်အကြာ #67 by အချစ်
ဒီစာမျက်နှာကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Balearic ကျွန်း V2 ။
3 နှစ်ပေါင်း3ရက်သတ္တပတ်အကြာ #77 by quietflyerBob
သင့်ရဲ့အလုပျအတှကျအမြားအပွားချီးမွမ်း, က '' ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသော tool ကို! ငါအချို့အတွက် add-on, ဥပမာသည့်အဲယားဘတ်စ် A300 Multi livery ဗူးနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုပါတယ်; ငါသည်ငါ့ Microsoft က FS directory ထဲတွင် install လုပ်ထားပါ 'နှင့်အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။ အခုတော့ငါအတွက်တူညီတဲ့ pack ကို install လုပ်လို w'd P3D အရမ်းတူ Program Files (x86) တွင်တည်ရှိသောပေမယ် autoinstaller ငါ့ကိုရွေးဖို့ခွင့်ပြု does'nt သော P3D။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအခွားသူမြားစှာ Sims နှစ်ဦးစလုံးအတွက် Rikooo ကနေထုပ်ပိုး installed င်; ဘာဖြစ်တာလဲ? ကူညီပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
3 နှစ်ပေါင်း3ရက်သတ္တပတ်အကြာ #81 by Dariussssss
ငါသည်ဤလေယာဉ်များအတွက်ထုပ်ပိုးခဲ့ FSX ထိုသို့အတော်လေးကောင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတစ်စိတ်တစ်ဒေသနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဘူး P3D ဒါပေမယ့်သင်ကဤနှစ်ခုကိုဆင်းမ်များနှင့်အတူပဋိပက္ခအချို့မျိုးရှိသည်ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့။ ငါသည်သင်တို့ကြောင့်လမ်းလုပျနိုငျပါက, သူတို့ကိုကွဲပြားခြားနားသော hard drive တွေအပေါ် installed ရှိသည်ဖို့မကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး ... သင်နှစ်ဦးစလုံးတူညီသောအရပ်ပေါ်မှာ install လုပ်ထားခဲ့ကြကြောင်းထောက်ပံ့သော pics အပေါ်ကိုကြည့်ပါ။
1.146 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်